कक्षा ११ को छात्रवृत्ति : कहिले हट्छ अन्योल ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कक्षा ११ को छात्रवृत्ति : कहिले हट्छ अन्योल ?
काठमाडौं । कक्षा ११ को छात्रवृत्ति विद्यालय तहबाटै छनोट गर्ने भएपछि विद्यार्थी अलमलमा परेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सिफारिसमा संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था खारेज भएपछि छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन तयार भएका सयौं विद्यार्थीलाई समस्या परेको छ ।
सबै स्थानीय निकायले आफ्नै ढंगबाट छात्रवृत्ति दिने तयारी गरेपछि समस्या बढ्दै गएको हो । ललितपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई ५० र सामुदायिक विद्यालयबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको छ । अधिकांश स्थानीय निकायले स्थानीयबासीका छोराछोरीलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने योजना बनाएका छन् । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले अब आफूले पढ्न चाहेको विद्यालयमा भर्ना भई सोही विद्यालयमा छात्रवृत्ति फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ।
पाल्पा, १३ मङ्सिर । पाल्पाका ग्रामीण भेगका विद्यार्थीलाई दुई तीन घन्टा पैदल हिँडेर पढ्न जानुपर्ने समस्या […]
पार्टीमा शक्तिशाली प्रचण्डका पारिवारिक दुःख
काठमाडौं । शक्तिशाली पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जति शक्तिशाली छन्, त्यति नै उनका दुःख पनि छन् । […]
मलाई जनकपुर जाने वातावरण बनाइदिनुहोस्ः राष्ट्रपति
असोज ६। काठमाडौँ, राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले मधेसमा भइरहेको आन्दोलन र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न […]
तेल तस्करीमा भारतीय सक्रिय
कात्तिक ३०। काठमाडौं, सीमावर्ती भारतीय बजार नक्सलबाडीका २८ वर्षे दीपचन्द्र दास 'वारिपारि कारोबार' का स्थानीय […]